May 28, 2020 – Xorriya Online
Dowladda Soomaaliya oo si adag ugu hadashay dhalinyaradii lagu laayay Gololey
Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay falkii argagaxa lahaa ee ka dhacay deegaanka Gololey oo hoos-tagta degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo lagu dilay illaa 8 dhalinyaro ka shaqeynayay xarun caafimaad. War saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu sheegay xasuuqa falalka noocaan ay ku caan baxeen kooxaha argagixisada, ayna ka shaqeeyaan […]
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir oo dhaliilay dhalinyaradii lagu dilay Gololey
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa si kulul u cambaareeyay falkii arxan-darada ahaa ee lagu laayay dhalinyaro ka shaqeynayay xarun caafimaad oo ku taal deegaanka Gololey ee Gobolka Shabeellaha Dhexe. “Maanta Soomaaliya kama go’aan 8 dhallinyaro oo waxbaratay, waliba Gobalka Sh/Dhexe oo aan ognahay baahida caafimaad ee ka jirta xilligan adag, Falkan […]
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa ka hadlay dhacdadii maanta ee deegaanka Gololey, halkaasoo lagu dilay illaa 8 wiil dhalinyaro ahaa oo ka shaqeynayay xarun caafimaad ku taalla deegaanka. Dhalinyaradan ayaa ahaa kuwo wax bartay oo si gaar ah uga howlgalayay xarunta MCH-ka deegaanka Gololey oo ay maamusho Hey’ad Maxalli ah oo […]
Faahfaahino dheeri ah ayaa ka soo baxeysa meydad la soo dhigay deegaanka Gololeey ee degmada Balcad kuwaas oo wada ahaa dhalinyaro deegaano u hayay shaqooyin caafimaad. Meydadka illaa sagaal ruux oo u badan dhalinyaro ka howlgalaysay xarun caafimaad oo ay ku leedahay hay’ada Zamsam oo laga helay duleedka deegaanka Gololey ayaa la geeyay magaalada Muqdisho. […]
Meydad tobaneeyo gaaraya oo la soo dhigey deegaanka Gololey ee degmada Balcad
Wararka ka imanaya deegaanka Gololey ee degmada Balcad ayaa sheegaya in la soo dhigey banaanka deegaankaas meydadka siddeed dhalinyaro ah oo shalay laga qafaashay deegaanka Gololey. Dhalinyaradan oo qaarkood ka shaqeynayay xarun caafimaad iyo qaar kale oo degenaa deegaanka Gololey ayaa shalay laga qafaashay isla deegaanka. Lama oga cidda ka dambeysay dilka dhalinyarada la soo […]
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee maamulka Puntland ayaa maanta oo khamiis ah dil ku fulisay askari shan sannadood ka hor si bareer ah u dilay taliyihii ilalaada garoonka diyaaradaha Boosaaso Marxuum Xasan Shire Ammaan. Askariga xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa lagu magacaabi jirey Axmed Aadan Maxamed Gaagaale ayaa lagu toogtay meel fagaare ah oo […]
Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay qarax maanta ka dhacay maanta degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo goobta uu qaraxu ka dhacay tegay ayaa sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen sarkaal watay gaariga qarxay oo la oran jirey Cabdishakuur Xuseen Cabdi Dhicisow (Jaabiri) iyo qof kale oo la […]
Wararka goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay Muqdisho ku dileen dabley nabadoon caan ahaa iyo askari ilaalo ahaan ula socday, iyadoo markii dambe kooxdii hubeysnaa ay baxsadeen. Dilkan oo ka dhacay degmada Yaaqshiid, gaar ahaan xaafadda Suuq Bacaad ayaa wararku sheegayaan in Nabadoonka ay weerareen dabley Bistoolado ku hubeysnaa oo […]
Wasiir Ahmed Fiqi oo digniin u diray Ganacsatada iyo shacabka reer Galmudug
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in Ganacsatada iyo shacabka reer Galmudug ay uga digayaan in Al-Shabaab ay siiyaan lacagaha loogu yeero zakawaadka oo uu tilmaamay inay tahay baad shacabka in muddo laga qaadayay. Axmed Fiqi ayaa sheegay in sida Al-Shabaab ula dagaalamaan oo kale ay ula dagaalami doonaan dadka Al-Shabaab siiya lacagaha […]
Gaari uu watay Sarkaal Boolis ah oo qarax lagula eegtay Muqdisho
Gaari uu watay Sarkaal Boolis ah ayaa qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamar weyne. Qaraxa goordhaw lala eegtay sarkaalka oo ka dhacay degmada Xamar weyne ayaa jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka Gobolka Banaadir. Sida wararku sheegayaan qaraxa ayaa ahaa mid loogu xiray gaarigiisa Sarkaal ka tirsan ciidanka Booliska, waxaana uu qaraxa […]